Shirwaynihii 8aad Ee Xog-iswaydaarsiga Xukuumada Iyo Shacabka DDSI Oo maalintii 3aad galay - Cakaara News
Shirwaynihii 8aad Ee Xog-iswaydaarsiga Xukuumada Iyo Shacabka DDSI Oo maalintii 3aad galay
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis 11ka May 2017.Waxaa maalintii 3aad galay shirwaynihii 8aad ee xog-iswaydaarsiga xukuumada iyo shacabka DDSI oo maalimihii udanbeeyayba kasocday hoolka shirarka madaxtooyada ee kaali.
Hadaba shirwaynahan oo uu hogaaminayay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayay maanta ergada oo isugu xidhnaa koox koox soo jeediyeen jawaabihii suaalahii loosoo dhigay inay kadoodaan oo kala ahaa. 1 sideen ooga hortagi karnaa saamaynta isbadalka cimilada. 2 sideen kujabin karnaa fikirka mashaqaystanimadka. 3 sideen ooga hortagi karnaa xagjirnimada. 4 sidee loosii xoojinkaraa nidaamka dawladnimo. 5 sideen ooga hortagi karnaa cadawga koobaad aynu leenahay ee saboolnimadka.
Waxayna ergada oo dhamaan ka jaawabay su'aalahaas soo jeediyeen in saamynata isbadalka cimiladu ooga gaashaaman karno inaan samaysano waxsoosaar beero iyo waliba kayd inoo yaala, Waxayna ergadu xuseen in fikirka mashaqaystanimadku yahay mid aad uxun islamarkaana loo baahan yahay in bulshada la baraarujiyo shaqa abuurna loo sameeyo, Sidoo kale waxay ergadu sheegeen in fikirka xagjinimadka uu yahay mid xayawaanimo ah islamarkaana loo baahan yahay in ay shacabka iyo xukuumada oo gacmaha ishaysta si wadajir ah oola halgamaan fikirka xagjirnimadka. Iyagoo intaa kudaray in nidaamka dawladnimo lagusii xoojin karo tageerida XDSHSI oo ah xisbi kajawaaba baahida bulshada. Sidoo kale waxay ergadu soo jeediyeen in cadawgeena koobaad ee saboolnimada ooga hortagi karno in lasameeyo waxsoosaar heer caalam ah islamarkaana bulshada deegaanka lagu baraarujiyo waxsoosaarka beeraha iyo ku foorarsiga dhulka.
Ugudanbayna Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hadalkooban kabixiyay soojeedintii ergadu ay soo jeediyeen isagoo madaxwaynuhu sheegay in dhamaan kooxaha kaladuwan ee ergadu sidii loogu talagalay ooga jawaabeen 5tii su aalood ee ay maalmihii ugu danbeeyay kadoodayeen, Wuxuuna madaxwaynuhu intaa kudaray in kooxaha ergada oo si kaladuwan usoojeediyay jawaabaha su aalaha loosoo dhigay balse ay dhamaantood iskumid kayihiin ujeedada guud ee loobaahnaa in looga jawaabo su aalahaas.
Sikastaba ha ahaatee shirwaynaha 8aad ee xog-iswaydaarsiga xukuumada iyo shacabka DDSI ayaa halkaa kasii socondoona.